Rahoviana ianao no afaka mindrana sy mampiasa sary an-tserasera? | Martech Zone
Rahoviana ianao no afaka mindrana sy mampiasa sary an-tserasera?
Sabotsy, Martsa 10, 2018 Alahady 1 aprily 2018 Douglas Karr
Orinasa iray iasako miasa tato ho ato no namoaka fanavaozam-baovao tao amin'ny Twitter miaraka amin'ny sariitatra mahatsikaiky izay nisy ny sary famantarana azy ireo aza. Gaga aho satria tsy nieritreritra hoe nanakarama mpanao sariitatra ry zareo. Nandefa taratasy ho azy ireo aho ary gaga izy ireo… nanakarama orinasan-tserasera izy ireo mba hampiroborobo sy hanatsara ny fanarahan'izy ireo ary navoakan'izy ireo.
Taorian'ny fifanakalozan-kevitra tamin'ny orinasa dia vao mainka nanaitra azy ireo ny nahita fa ny sary rehetra, ny meme rehetra, ary ny sarimiaina rehetra nozaraina dia natao izany raha tsy nahazo alalana avy tamin'ny orinasa. Noroahin'izy ireo ilay orinasa ary niverina izy ireo ary nanala ny sary rehetra nozaraina tamin'ny Internet.
Tsy fahita izany. Hitako hatrany hatrany hatrany izany. Ny iray amin'ireo mpanjifako dia norahonana tamina fitoriana aza taorian'ny nampiasan'izy ireo sary izay nolazain'ny motera fikarohana fa afaka ampiasaina malalaka. Tsy maintsy nandoa dolara an'arivony maro izy ireo mba hialana amin'ilay olana.
Meloka indrindra ny orinasa amin'ny fanovana sary halatra ho an'ny doka, miaraka amin'ny 49% amin'ireo bilaogera sy mpampiasa media sosialy mangalatra sary, ary koa 28% -n'ny orinasa
Ity misy fanararaotana farany nataon'ny orinasa iray izay nampiasa ny sariko studio podcast, saingy nopetahana ny sary famantarana azy ireo:
Raha jerena ny fampiasam-bola nataoko na tamin'ny studio na tamin'ny sary, mampihomehy ny fisamborana azy fotsiny ny olona iray ary hanipazany azy ireo ny sary famantarana azy. Nandefa fampandrenesana tamin'ny fikambanana rehetra aho.
Ho an'ny fandriam-pahalemana dia ataontsika foana ny iray amin'ireto manaraka ireto amin'ny tranokalanay sy ny mpanjifanay:
I manakarama mpaka sary ary miantoka fa manana ny zony feno ny orinasako hampiasa sy hizara ireo sary karakaraiko ho raisin'izy ireo tsy misy fetra. Midika izany fa azoko atao ny mampiasa azy ireo amin'ny tranokalako, tranokalan'ny mpanjifa marobe, fitaovana fanontam-pirinty, na hanome fotsiny ny mpanjifa hampiasaina araka izay itiavany azy ireo. Ny fanofana mpaka sary dia tsy tombony ho an'ny fahazoan-dàlana fotsiny, fa misy fiatraikany mahatalanjona amin'ny tranokala ihany koa. Tsy misy toa ny tranonkala eo an-toerana izay manana mari-toerana eo an-toerana na ny mpiasan'izy ireo manokana amin'ny sarin'izy ireo an-tserasera. Izy io dia mampiavaka ireo tranokala ary manampy fidirana an-tsehatra lehibe.
I hamarinina ny fahazoan-dàlana isaky ny sary mampiasa na mizara izahay. Na dia eo amin'ny tranonkalantsika aza dia manome antoka aho fa misy dian-taratasy isaky ny sary. Tsy midika izany fa mandoa ny sary rehetra isika. Ohatra iray ny infographic etsy ambany - nahazoana alàlana araka ny voalaza ao amin'ny fandefasana voalohany an'i Berify.
Berify dia fikarohana sary miverina manampy anao hahita sary sy horonan-tsary halatra. Izy ireo dia manana algorithm fampifanarahana sary ary afaka mikaroka sary maherin'ny 800 tapitrisa miaraka amin'ny angona sary avy amin'ireo motera fikarohana lehibe rehetra.
Raha ny sary sy ny sary halatra no resahina, dia aleon'ny mpampiasa an-tserasera izay maharitra ny halatra - mihevitra azy io ho toy ny heloka bevava ary tsy mila fialan-tsiny. Na izany aza, ny mpaka sary matihanina sy ny fialamboly mahalala ny zava-misy - ankoatry ny tsy etika, ny halatra sary dia tsy ara-dalàna ary lafo. Berify
Ity ny sary feno, Saripika fakana halatra sary an-tserasera. Izany dia manazava ny olana, ny fomba fiasan'ny zon'olombelona sy ny fampiasana ara-drariny (izay manararaotra orinasa be loatra), ary inona no tokony hataonao raha hitanao fa nangalarina ny sarinao.
Tags: manome voninahitraCopyrighthalatra saryfampiasana saryfampiasana sarySary torohaymangalatra saryatiny halatra
Douglas Karr Saturday, March 10, 2018 Sunday, April 1, 2018
SalesRep.ai: Fampiasana ny faharanitan-tsaina hampandehanana ny fifandraisan'ny Prospect Multi-Channel
El Toro: Doka IP mifototra amin'ny tanjona, Cookieless Geographic Advertising